Wararka - Waa maxay faa'iidooyinka nidaamka maaraynta bakhaarka RFID?
Si kastaba ha ahaatee, xaaladda dhabta ah ee hadda jirta ee qiimaha qaaliga ah iyo hufnaanta hoose ee isku xirka bakhaarrada, iyada oo la baadhay hawl-wadeennada bakhaarrada saadka ee qolo saddexaad, shirkadaha bakhaarrada ee warshaduhu leeyihiin iyo kuwa kale ee isticmaala bakhaarrada, ayaa la ogaaday in maamulka bakhaarrada dhaqanka ay leeyihiin dhibaatooyinka soo socda.
1. Badeecada waxa lagu wadaa in bakhaarka la geliyo, rasiidhka bakhaarkana wali lama dirin, markaa si degdeg ah looma shaqayn karo.
2. Gaadhigii keenista oo muddo dheer maqnaa. Ka dib markii la hubiyo alaabada, waxaa la ogaaday in alaabtu aysan weli ku jirin bakhaarka.
3. Badeecada waa la dhigay, laakiin waa la ilaaway in la diiwaan geliyo meesha lagu kaydiyo ama meel khaldan ayaa la qoray, waxayna qaadanaysaa maalin badhkeed oo kale si loo helo alaabta.
4. Markay ka baxayaan bakhaarka, shaqaaluhu waxay u baahan yihiin inay bakhaarro badan oo hore iyo gadaal u ordaan si ay alaabta uga soo qaadaan, wakhtiga sugitaanka baabuurtuna waa dheer yahay.
5. Saxanku waa dhawr maalmood, markaa waxtarkeedu runtii aad buu u hooseeyaa, waxtarkiisuna wuu hooseeyaa, khaladaad badana wuu dhacaa.
6. Tiro badan oo wax soo saarka mustaqbalka dhow ayaa la tirin karaa mar kasta oo alaabada la qaadayo, marka hore, soo bixitaanku waxay noqdeen hadal madhan.
Jiritaanka dhibaatooyinka bakhaarrada ee kor ku xusan waxay saamayn xun ku yeesheen horumarka iyo hawlgelinta ganacsiga, waxaana loo baahan yahay in si degdeg ah loo xalliyo loona hagaajiyo heerka maamulka bakhaarka. Soo ifbaxa nidaamka maaraynta bakhaarka RFID wuxuu siinayaa ganacsiyada hab ku habboon, hufan oo caqli badan oo maarayn bakhaar.
Haddaba, wajaheysa dhibaatooyinka bakhaarka kore, maxay yihiin faa'iidooyinka nidaamka maareynta bakhaarka RFID?
Isagoo soo saaraya Calaamadaha elektiroonigga ah ee RFID Meel kasta oo bakhaar ah iyo meel lagu kaydiyo oo ku taal bakhaarka, iyo qalab kala duwan oo gaar ah, waxay xaqiijin kartaa aqoonsiga tooska ah ee palette-ka iyo macluumaadka kaydinta alaabta, taas oo si weyn u fududaysa isticmaaluhu inuu maareeyo alaabta alaabada.
Isla mar ahaantaana, iyada oo loo marayo UHF RFID tag ku xidhida badeecada, waxay si sax ah u kala saari kartaa dhibaatooyinka maamul ee dhabta ah sida dufcaddii, moodeelka, magaca badeecada, wakhtiga kaydinta, alaab-qeybiyaha, heerka, iwm.
Hawlaha maalinlaha ah ee helista waxa si toos ah ula mid noqon kara qalabka gacanta ee RFID, waxaadna ogaan kartaa tafaasiisha hawsha iyada oo aan waraaqo la helin.
Xogta rasiidka uma baahna in gacanta lagu duubo, nidaamkuna si toos ah ayuu u ururiyaa oo u tiriyaa si loo hubiyo saxnaanta xogta rasiidka.
Ka dib marka ay alaabtu soo gasho bakhaarka, nidaamku si toos ah ayuu u cusboonaysiin doonaa tirada alaabada bakhaarka, dukumeentiguna sidoo kale waa la dhammaystiri doonaa.
Kadib markii Nidaamka maaraynta bakhaarka RFID waxaa lagu dhex daray RFID forklift, hawlaha shelf waxaa la siin karaa forklift RFID si loo fuliyo.
Fargeetada RFID waxay si toos ah u sawirtaa sariirta, waxay soo bandhigtaa macluumaadka xamuulka ee palette-ka iyo macluumaadka kaydinta, waxay soo gudbisaa goobta lagu kaydiyo xamuulka wakhtiga dhabta ah, waxayna kordhisaa agabka shelf
Nidaamku wuxuu si toos ah u wanaajin doonaa dariiqa socodka, looma baahna in hore iyo gadaal loo socdo, kaliya hal lugood si loo dhammeeyo soo qaadashada alaabta.
Fargeetooyinka RFID waxay baadhaan calaamadaha RFID si ay si degdeg ah u xaqiijiyaan macluumaadka alaabta dibadda laga keenay, waxayna samayn karaan xaqiijinta ugu horraysa-ba si ay u horumariyaan wareejinta agabka.
Ka dib marka dhoofitaanka la dhammeeyo, alaabada dibadda laga soo saaray si toos ah ayaa loo dhimayaa.
Looma baahna rasiidhada alaabada waraaqaha ah, iyo goobta shaqada moobaylka ee RFID waxay si bilaa xadhig ah u eegi kartaa rasiidhada nidaamka onlayn.
Looma baahna in gacanta lagu duubo macluumaadka xogta alaabada, nidaamkuna waxa uu taageerayaa diiwaanada hawlgalka goobta.
Saxnaanta alaabtu waxa ay gaartaa heerka goobta iyo heerka palette-ka, taas oo ka dhigaysa agabka in la fuliyo oo la fuliyo; taageero alaabta iyo bakhaarka gudaha iyo dibadda ganacsiga isku mar.
Marka lagu daro isticmaalka fargeetada RFID, xawaaraha alaabtu aad ayuu u dheereeyaa, xogta kala duwanaanshaha alaabadana si toos ah ayaa loo soo koobayaa.
Codsiga nidaamka maaraynta bakhaarka RFID wuxuu si weyn u fududeeyaa hawl maalmeedka bakhaarka, xogtuna si toos ah ayaa loo ururiyaa oo la cusbooneysiiyaa, taas oo meesha ka saaraysa baahida loo qabo gelitaanka gacanta, iyada oo loo abuurayo xarun bakhaar oo caqli-gal ah oo otomaatig ah oo shirkaddu leedahay si loo yareeyo kharashaadka loona kordhiyo waxtarka. .
Waqtiga boostada: Dec-31-2021